Heerarka ugu sarreeya ee lagu jiido qasabadaha jikada oo leh jiido hoos ku buufiye
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada / WOWOW Heerka Sare ee Lagu Qiimeeyo Arc Kaliya Gacanta Burushka Nickel Jikada Qasabadaha oo jiidaya Buufiye SUS 304 ahama
WOWOW Heerka Sare ee Qiimeynta Sare ee Lagu Sameeyo Nukliyeyaasha 'Nickel Kitchen Faucets' oo leh hoos u jiide buufiyaha SUS 304 ahama
Tuunbada jikada leh buufinta hoos loo jiido waxay ka samaysan tahay dahaadh naxaas ah iyo maydhida leedhka. SUS304 waa mid jawiga u fiican oo caafimaad leh, caafimaadkeenuna wuxuu kuxiranyahay ilaaliyeheena. Waxaa lagu hagaajin karaa wareegga kulul iyo qabow, si fudud loo beddelo, si sahlan loo rakibo, mid hufan oo xarrago leh, waxayna ku habboon tahay musqusha kala duwan iyo qurxinta jikada
Soo riix tubooyinka weelka jikada 2310301
Doorashada qubeyska saxanka jikada, mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan waa caafimaadkaaga iyo ilaalinta deegaankaaga. Tubooyinka saxanka jikada ee aan ka samaysanayn alaab adag iyo tayo sare leh, ayaa laga yaabaa inay wax u dhinto caafimaadkaaga sababta oo ah hadhaaga sunta ah ee kudarta biyahaaga cabitaanka. Tubooyinka jikada ee jikada ee WOWOW waxay ka samaysan yihiin naxaas la safeeyey iyo alaabo tayo sare leh. Marka lagu daro walxaha birta ka samaysan, kuwa hoos u dhacaya tubooyinka weelka jikada waxay ku siinayaan qiimaha ugu fiican ee lacagta marka loo eego tayada, cimriga iyo adkeysiga. Fiilo tayo sare leh oo heer sare ah oo ka soo daadata tubooyinka tubada weelka jikada waxay socon karaan ugu yaraan 500,000 wareegga biyaha oo gabi ahaanba aan qallajin karin. Tani waxay ka sarreysaa heerka cabirka warshadaha. Iskusoo wada duuboo, hoos u dhig tuubooyinka jikada ee WOWOW biyo badbaadin sababta oo ah madaxa buufinta hal-abuurka leh. Xaqiiqdi waxaad tan ku ogaan doontaa biilkaaga biyaha!
Caafimaadka ka sokow, shaqooyinka ay leeyihiin qasabadaha tubada weelka jikada ayaa sidoo kale kala duwan. Qalab-sameeyeyaal badan ayaa loo adeegsan karaa laba qaybood: durdur adag markii aad dige ka buuxinayso biyo tusaale ahaan, iyo buufin adag oo lagu nadiifiyo weelka tusaale ahaan. Qolka keliya ee tubada jikada ayaa fududeynaya la qabsiga qadarka iyo heerkulka biyaha. Dhanka kale, shaashadaha wareegaya waxay u rogi karaan 360 digrii raaxada ugu badan. Ugu dambeyntiina uguyaraan, tubada qubeyska ee hal-maydh ayaa leh tuubada soo jiidashada ah 1.5 m si ay kuu siiso meel weyn oo lagu mayro 80 cm. Taasi waxay si gaar ah u habboon tahay marka aad leedahay weelka jikada ee jikada laba jibbaaran, laakiin sidoo kale weel qolka jikada ah kuwan tubooyinka jikada ee WOWOW way fiicnaan karaan. Meel keliya oo ku dhex taal ama agagaarka weelka jikadaada laguma qaadi karo tuubooyinka-weelka jikada ee WOWOW.
Tuubooyinka weelka jikada ee qurxinta
Ka sokow caafimaadka iyo waxqabadka, dabcan, waxaad sidoo kale dooneysaa qasabadaha qolka jikada oo qurux badan. Fauce-ka jikada jikada waa inay sameysataa midnimo isku dhafan oo ku saabsan naqshadda jikada oo dhan. Dadka qaar ayaa dhayalsaya saameynta tubooyinka jikada. Markii qof galo jikada, dareenkiisa ama ayada ayaa si toos ah u soo jiidanaysa tubooyinka jikada. In kasta oo tubooyinka jikada ay aad u yar yihiin, waxay saameyn aad u weyn ku leeyihiin guud ahaan qurxinta jikadaada. Sidaas awgeed ayay muhiimadda ugu weyn u leedahay inaad u doorato tubada jikadaada si xikmad leh, maadaama ay jikadaada siin karto casriyeyn weyn. Nambooyinkan loo yaqaan 'nickel' ee jiidaha jikada ee jikada jikada ee WOWOW ayaa kaa siin doona kor u kacan shaki la'aan.
Soodhadhka tuubooyinka saxanka jikada ayaa faa iido weyn ka leh noocyada kale ee tubbada weelka jikada. Sababtoo ah tuubada biyaha dib loo celin karo, si fudud ayaad ugu fidi kartaa tubada weelka jikada. Muuqaalkaan fudud, waxaad ku gaari kartaa meelkasta meel ama meel u dhow saxanka jikadaada. Hadana, tuubada ayaa si habsami leh ugu dhex jirta tubbada weelka jikadaada, sidaa darteed ma arki doontid wax biyo tuubada ah marka aadan isticmaaleynin tubbada tubada weelka jikada. Shuruudda kaliya ayaa ah inay lahaato qalab tayo sare leh oo ka-noqoshada. Waxay noqon kartaa qanacsanaan buuxda in la soo jiito tuubooyinka weelka jikada oo tuubada biyuhu aysan u soo noqonaynin sida ay tahay. Waa inay 100% si habsami leh ugu shaqeyso si ay kuu siiso raaxada ugu badan.
Kusoo hagaaji jikadaada qasabadaha tubooyinka jikada
Hoos u soo jiido qasabadaha saxanka jikada ee WOWOW noloshaada way fududeynayaan. Naqshadeynta kubbadda cufnaanta cufnaanta ee kuwan qasnadaha weelka jikada ka dhigaysa mid gebi ahaanba siman in laga soo saaro oo lagala baxo tubbada biyaha. Kubadda cuf isjiidadka ayaa si toos ah dib ugu soo celisa buufiye, sidaa darteed uma baahnid inaad dadaal naftaada gabi ahaanba marka aad dhammaysatid maydhashada saxanka jikadaada. qaabka iyo shaqeynta. Sidaan soo sheegnay, tubbada hoos u jiidaya tubbada WOWOW waxay bixisaa 2 shaqooyin biyo ah: durdur iyo buufin. Labadan hawlood waxay kuu oggolaanayaan inaad si fudud oo si khaldan ergonom ahaan uga wareejiso buufinta qulqulka ama dhinaca kale. Waxaad ku sameyn kartaa adiga oo dhaqaaqaya far fudud adigoon marka hore joojin biyaha. Badhanka ayaa si habsami leh u socda wuxuuna bixiyaa raaxada ugu badan.
Sicir macquul ah oo qiimo jaban tuubooyinka weelka jikada
Tayada ayaa ku timaadda qiime, laakiin maaha WOWOW. WOWOW waxay ku guuleysatay inay ku siiso tubooyin qubeys heer sare ah oo tayo sare leh oo wali la awoodi karo. Iyada oo ay ugu wacan tahay soo iibsashadeeda wax ku oolka ah ee alaabada iyo soosaarka otomaatiga u ah iyo hannaanka tijaabinta, WOWOW waxay awoodaa inay ku siiso inaad hoos u dhigto tubooyinka weelka jikada ee kula tartami kara tubooyinka weelka jikada A-brand-ka, laakiin haddana in yar oo ka mid ah qiimayaashaas. Sidaa daraadeed waxaan kalsooni ku qabnaa inaan nidhaahno kama heli doontid qashin qubayska jikada qiimahoodu ka qiimo fiican yahay WOWOW. Sidaas awgeed, WOWOW waxay ku siinaysaa saamiga ugu sarreeya ee suuqa aad ka heli karto suuqa.
Maaha wax bilaash ah WOWOW waxay bixisaa 90-maalmood oo lacag celin ah oo dammaanad ah oo ku saabsan qasnadaha qasabada weelka jikada. Markaad u maleyneyso in tubooyinka jikadayadeena jikada aysan ahayn wixii aad ka fileysay, waan kuu soo celin doonaa iyadoo aan wax dhibaato ama su'aalo ah aan la weydiinin. Fudud sida tan. Waxaan u istaagnaa alaabadayada oo waxaan ku qanacsanahay inaan bixinno tuubooyinka tuubada jikada korka ka soo kaca. Sidaa darteed waan ognahay inaadan niyad jabin doonin oo aad si wanaagsan ula yaabi doontid tubada qolkaaga jikada cusub. Waxaan leennahay macmiil badan oo soo laabanaya oo ka kala yimid adduunka oo dhan, waana hubnaa inaad adigu dooran doontaba waqtiga soo socda sidoo kale.
Rakibaad fudud ayaa la hubo
Tuubooyinka jikada ee jikada ee WOWOW way fududahay in la rakibo sababtoo ah istiraatiijiyadeeda fudud. Waxaad ku rakibi kartaa tubadan hal tallaabo kaliya. Sidaa darteed waad ku rakibi kartaa tuubooyinka qubista jikada ee jikada. Khasab kuguma aha inaad shaqaaleysiiso xirfadle qaali ah si aad lacag badan ku badbaadin karto halkan sidoo kale. Tubada saxanka jikada ee WOWOW waxaa ku jira saxan saxan, kubad culeys ah, gogol biyo ah kuleyl iyo qabow iyo xirmo rakibayaal. Go'ankan dhammeystiran wuxuu dammaanad ka qaadayaa wax ku ool ah oo dhakhso leh. Si fudud sidaas oo kale!
Faa'iidooyinka ay leeyihiin tuubooyinka qubayska jikada ee si tartiib tartiib ah:
Kitchen Waxay siinaysaa shey-walax jikada kasta
Leg Si xarago leh u caday nikkel
Quality Tuubbo biyo oo tayo sare leh hoos u dhig
Gacan-yare lever hal raaxo leh
Laba hawlood oo biyo ah
Ka samaysan waxyaabo naxaas ah oo tayo sare leh
● Si fudud loo nadiifiyo oo si fudud loo ilaaliyo
5-sano oo dammaanad ah
SKU: 2310301 Categories: Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada, Qubeyska jikada Tags: Nickel caday, Hoos u jiid, Hal-Hole
1or 3 Mount dekedda
Habka Labaad: Habka lagu buufiyo / Habka durdurka
Bidix / Midig / Xarunta
Xakamaynta heerkulka biyaha
Jikada / Gudaha / Ganacsiga / Makhaayada / Hoyga / 1or2 saxanka
Qasabadda qasabadda jikada; 50cm Hoos biyo kulul & qabow; Hoos u dhig buufinta; Saxanka dekedda; Qalabka dhejinta
WOWOW Flat Kitchen Fucet Foornada Neefta leh
La iibiyey: 62
WOWOW Matte Black jikada Isku-darka qasabadda